How law protects you- isiZulu
SARS Home > Targeting Tax Crime > Report a tax crime > How law protects you- isiZulu
UMTHETHO UKUVIKELA KANJANI UMA UBIKA NGOBUGEBENGU KWEZENTELA
Imithetho ka-SARS ihlinzeka uvikelo ngokuvulelekile kubantu ababika ubugebengu bentela.
Uma ufisa ukubika ubugebengu bentela ku-SARS, sizokucela ukuba ugcwalise umbiko wemisebenzi esolisayo. U-SARS uzozama ngokusemandleni ukuvikela ukuhlonzwa kwakho ngaphansi kwanoma yiziphi izimo. Lokhu kungaguquka kuphela ngansi kwesimo esisodwa nokuyilapho ubufakazi bakho budingeka ecaleni lobugebengu. Ecaleni elinjalo, kukhona ezinye izindlela zokuvikela ukuhlonzwa kwakho ezisemthethweni, u-SARS ekanye nawe uzokhulumisana noPhiko Lwezokushushiswa Komphakathi (i-NPA)ukuqinisekisa ukuthi leyo mithetho iyasetshenziswa.
Uma icala lingase lithikameze ukuvikeleka kwesizwe kumbe libe nobungozi bokufa kuwe, uSARS uzonxusa u-NPA ukuba akufake ngaphansi kohlelo lokuvikelwa kofakazi nobusingethwe ngu-NPA. Ngokungavamile u-SARS useke kwafanele ahlinzeke ofakazi ngovikeleko lwabaqaphi kanye nezinye izindlela.
Uma ufisa ukubika ngemisebenzi engekho semthethweni yezentela nokholwa ngukuthi kwenziwe ngumqashi noma isikhungo somphakathi uzothola ukuvikelwa “njengomshayi wekhwelo” ngaphansi koMthetho WokuDalula Okuvikelwe. Esimweni esinjalo, sicela wazi ukuthi uma ubikela u-SARS, uyasazisa ukuthi ubika ngecala ngokuhambisana noMthetho WezokuDalula Okuvikelwe, 26 ka-2000.
Last Updated: 16/09/2016 9:42 AM ​